China neTurkmenistan-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Central Asia Mutsara>China kuTurkmenistan
Kuendesa kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
Kana iwe uchitsvaga wekuvimbika wekutakura zvinhu kuti ubatsire kutumira kwako kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan, uri munzvimbo chaiyo
Kunyangwe basa rekutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan rakakura kwazvo mazuva ano, SHL inogona kugara ichiedza kuita kuti zvinhu zvishande kushanda zviri nani, kunze kwemhinduro yakanakisa uye basa rakanaka, tinokwanisawo kupa mitengo yekukwikwidza kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan.
SHL ichabatsira yako kusarudza yakanyanya nzira yekutumira nzira, yemakwikwi yekutumira mutengo uye yakanakisa yekufambisa makambani kubatsira yako yekuendesa kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan.
China European Mugwagwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
China Railway Express kubva China kuenda Turkmenistan
SHL inopa yakatsiga njanji sevhisi pakati peChina neTurkmenistan yeFCL neLCL zvinhu zvekutakura, One Belt uye One Road projekiti zvigadzirwa zvekupinza uye kutumira kunze zvakagadziriswa mhinduro uye isu tinogona kugadzirisa matambudziko ekubvisa tsika muChina.
Nzvimbo Inorema Kutakura Zvitima Kutakura Kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
SHL inogona kupa Kavha Rori крытый вагон Vhura Wagon полувагонах вагон Flatbed Rori платфрму вагон, chaiyo michina, mota uye inorema michina kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan Tinogona kupa imwechete kumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Ro-Ro / Kupwanya Bulk Kutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK chaiyo michina, mota uye zvinorema michina kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan Tinogona kupa kumira kumwe chete uye kwakaenderana mhinduro.
Kutakura Gungwa Kukutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
SHL ine huwandu hwakasimba hwekutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuFelixstowe, Southampton, nezvimwewo kuitira kuti isu tigare tichiwana zvakanaka nyanza dzekutakurwa kuenda kuTurkmenistan port kubva kune vatakuri vazhinji, uye isu tinokwanisa kuve nechokwadi nzvimbo yemidziyo kunyange mumwaka wepamusoro.
Kutakura Mhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
Kune nzvimbo dzakawanda dzekutandarira dzepasi rose muTurkmenistan uye kunewo zvinhu zvakawanda zvekutakura kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan nendege, SHL inogona kupa mhepo yemakwikwi yakakura kwazvo iyo yakaderera pane musika kune yedu mutengi zvichienderana nehurongwa hwako hwekuda.
China iri chinhambwe chinosvika 7,775 km kubva kuTurkmenistan asi kuyambuka chinhambwe ichi kunogona kutora nguva yakareba nekuda kwenzira dzegungwa dzinotsanangurwa nemiviri yemvura.
Main Airports muTurkmenistan
Craten East Airport
Gyaurs Nhandare Yendege
Mhando dzekutumira kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
Pese paunenge uchiunza kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan, unogona kusarudza nzira zhinji dzekutakura.
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan?
Nekuti iwe unoda chiteshi chinogona kukubatanidza iwe zvakananga neTurkmenistan
Ndeipi nguva yakazara inotorwa kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan?
Muchidimbu, iwe unogona kukonzera pane izvi zvese kuti uwane nguva yakakwana iyo inotora kubva kuChina kuenda kuTurkmenistan
Vakadaro vatakuri vemitoro vanoziva mitemo nemirairo inotungamira kupinza kubva kuChina ichipinda muTurkmenistan